ရွှေသာလျောင်းဘုရားပွဲမှာ ဖျော်ဖြေခွင့်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဇွန်သဉ္ဇာ – မြန်မာ့သတင်း
ရှာမယ်	ရှာမယ်	သတင်းစုံ ရွှေသာလျောင်းဘုရားပွဲမှာ ဖျော်ဖြေခွင့်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဇွန်သဉ္ဇာ MTD1 week agoAdd comment118 views
ဧရာဝတီတိုင်း ကြံခင်းပုလိုင်းရွာမှာ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက်
အထိ ၃ ရက်ကျင်းပမယ့် ရွှေသာလျောင်းဘုရားပွဲတွင် ပါဝင်ဖျော်ဖြေဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ဇွန်သဉ္ဇာကတော့ ဖျော်ဖြေခွင့် ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘုရားပွဲနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် သဘင်အစည်းအရုံးကနေ အခုလို ကန့်ကွက်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဦးတို့ မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးက ပါမစ်ပိတ်လိုက်ပါပြီ၊ ဇွန်သဉ္ဇာ ပါဝင်ကပြဖျော်ဖြေမယ်ဆိုရင် အမှုဖွင့်ပြီး ဖမ်းမှာပါ၊ ဒီပွဲမှာ မပါဝင်ဖို့အတွက် တားမြစ်ထားပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မသင့်လျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ” လို့ မြန်မာ
နိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးမှ ဒုဥက္ကဌ ဦးနေဝင်းက ပြောပါတယ်။
အကယ်၍ ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဇွန်သဉ္ဇာပါဝင်ခဲ့ပါက ဂေါပကအဖွဲ့ကို သဘင်အစည်းအရုံးက အမှုဖွင့် အရေးယူသွားမယ်လို့ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးနေဝင်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှ ရေးသားထားပါတယ်။
Add comment	Cancel reply	Comment Name * Email * Website ဒါလေးတွေပါဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ သတင်းစုံ Land Dispute Erupts Between Actor Lwin Moe andaKNLA Official A land dispute has risen between the well-known Burmese actor Lwin Moe andamajor with the Karen National Liberation Army (KNLA), an armed ethnic Karen organization. Both parties claim they own more than2acres near the famed Golden Rock in...
သတင်းစုံ First Private Bank cleared for listing First Private Bank will become the fourth firm to list on the Yangon Stock Exchange this month. The lender, which claims the oldest banking licence in Myanmar, has published its finances, expansion plans and fears ahead of the listing – offering a...